ကိုယျ့ကို ထားခဲ့တဲ့သူကို နောငျတရစခေငျြရငျ . . . . – Shinyoon
ကိုယျ့ကို ထားခဲ့တဲ့သူကို နောငျတရစခေငျြရငျ . . . .
အမေးမြားတဲ့ မေးခှနျးလေးပါ ။ ပွနျပွီးခံစားစခေငျြတာတော့ မဟုတျဘူး ဒါပမေယျ့ ကြှနျမရဲ့ တနျဖိုးကို သိစခေငျြတယျဆိုတဲ့ လူတှေ ဖတျဖို့ရညျရှယျပါတယျ ။ လူနှဈယောကျတှဆေုံ့ခွငျးတှမှော ရစေကျလိုပါတယျ . . . ဒါပမေယျ့ လူနှဈယောကျဝေးသှားဖို့ကတြော့ ရစေကျကုနျသှားဖို့မလိုဘူး ခွံခုနျသှားရငျလဲ . . . ဝေးသှားတတျပါတယျ ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ အရာရာကို ပေးဆပျပွီး ခဈြတတျခဲ့တဲ့ မိနျးကလေးတှကေ ဝမျးနညျးတယျဆိုတာထကျ ငါ ဒီလောကျပေးဆပျခဲ့တာတောငျ ဘာလို့ငါ့အပျေါလုပျရကျတာလဲဆိုပွီး မေးခှနျးတှေ နဲ့ ဒေါသတှေ ထှကျတတျတယျလေ ။
မခံမရပျနိုငျအောငျ နာကငျြလှနျးတဲ့အခါ သိပျခဈြပါတယျဆိုတဲ့လကျကို စှနျ့လှတျပဈလိုကျဖို့ဝနျမလေးတော့ဘူး တဈနကေ့ရြငျ . . .ဝဋျပွနျလညျပါစဆေိုတဲ့ ဆု မတောငျးရငျတောငျ တဈနကေ့ရြငျတော့ ကိုယျ့တနျဖိုးလေး သိစခေငျြတယျဆိုတဲ့ စိတျလေးတော့ ရှိတတျကွတယျ
ကိုယျ့ကို ထားသှားတဲ့ကို နောငျတတှေ ရစခေငျြတယျ ။ ငိုနတေဲ့မကျြလုံးတှေ မကျြရညျတှေ သုတျပဈလိုကျပါ ပွီးရငျ အလှဆုံး ရအောငျ ပွုံးလိုကျ ။ ယောကျြားဆိုတာမြိုးကလေ သိပျကို မပွတျသားတတျတဲ့လူမြိုး ။သူတို့ထားသှားတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျကို ပွနျပွီး ငဲ့ကွညျ့တတျတဲ့သူမြိုးလေ ။ ကိုယျက အဲ့ဒီအခြိနျမှာ မကျြရညျတှနေဲ့ ဝမျးနညျးပွနရေငျ နှဈခါမက ရှုံးတယျ သူ ငါ့ကို ခဈြနသေေးတာပဲ ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ကနြေပျနတေတျကွတာလေ ။
အရငျကထကျ ပိုပွီးလှအောငျနပေါ ညဘကျတှေ မအိပျပဲ မကျြတှငျးတှနေကျနရေငျ . . .အဆငျမပွဘေူး ညီမလေးရဲ့ အရငျကထကျပိုပွီးလှအောငျနေ . . .ဝမျးနညျးနရေငျ ပိုပွီးလှအောငျနတေတျရတယျ ဒါမှ သူမြားမမွငျမှာလေ ။ ယောကျြားဆိုတာမြိုးက . . .ကိုယျလှတျတဲ့ငါး ကွီးနတေတျရငျ တစိမျ့စိမျ့တှေးပွီး နောငျတတှေ ရနတေတျပါပဲ ။
ကိုယျထိလကျရောကျလကျစားခဖြေို့မလိုပါဘူး ။ ပွီးရငျ ဝဋျလညျပါစဆေိုတဲ့ ဆုလဲတောငျးဖို့မလိုပါဘူး ကိုယျက သူမရှိပဲ နနေိုငျနမှေနျးသိသှားတဲ့အခါ ကိုယျအလိုလိုနိုငျပါတယျ ။
ကိုယျ့ကို ထားခဲ့တဲ့သူကို နောငျတတှေ ရစခေငျြရငျ . . .အရငျကထကျပိုပွီး လှအောငျနပေါ ။ ရငျဘတျထဲ နာခငျြနာနပေါစေ မကျြနှာမှာ အလှဆုံး ရအောငျပွုံးပါ ဒါ အကောငျးဆုံး လကျစားခနြေညျးပါပဲ ။ လမျးမှာ မတျောတဆဆုံလာတဲ့အခါ . . .ကိုယျက သူ့လကျထဲမှာ ရှိနတေုနျးကထကျ ပိုပွီး အမွငျ့ကိုရောကျနတေဲ့အခါ သူ့ဘေးနားက မိနျးကလေးထကျ ကိုယျက ပိုပွီးရငျ့ကကျြနတေဲ့အခါ နောငျတတှေ တသီကွီးရလာပါလိမျ့မယျ ။
ကိုယ့်ကို ထားခဲ့တဲ့သူကို နောင်တရစေချင်ရင် . . . .
အမေးများတဲ့ မေးခွန်းလေးပါ ။ ပြန်ပြီးခံစားစေချင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ တန်ဖိုးကို သိစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေ ဖတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ လူနှစ်ယောက်တွေ့ဆုံခြင်းတွေမှာ ရေစက်လိုပါတယ် . . . ဒါပေမယ့် လူနှစ်ယောက်ဝေးသွားဖို့ကျတော့ ရေစက်ကုန်သွားဖို့မလိုဘူး ခြံခုန်သွားရင်လဲ . . . ဝေးသွားတတ်ပါတယ် ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အရာရာကို ပေးဆပ်ပြီး ချစ်တတ်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတာထက် ငါ ဒီလောက်ပေးဆပ်ခဲ့တာတောင် ဘာလို့ငါ့အပေါ်လုပ်ရက်တာလဲဆိုပြီး မေးခွန်းတွေ နဲ့ ဒေါသတွေ ထွက်တတ်တယ်လေ ။
မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်လွန်းတဲ့အခါ သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လက်ကို စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်ဖို့ဝန်မလေးတော့ဘူး တစ်နေ့ကျရင် . . .ဝဋ်ပြန်လည်ပါစေဆိုတဲ့ ဆု မတောင်းရင်တောင် တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကိုယ့်တန်ဖိုးလေး သိစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေးတော့ ရှိတတ်ကြတယ်
ကိုယ့်ကို ထားသွားတဲ့ကို နောင်တတွေ ရစေချင်တယ် ။ ငိုနေတဲ့မျက်လုံးတွေ မျက်ရည်တွေ သုတ်ပစ်လိုက်ပါ ပြီးရင် အလှဆုံး ရအောင် ပြုံးလိုက် ။ ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကလေ သိပ်ကို မပြတ်သားတတ်တဲ့လူမျိုး ။သူတို့ထားသွားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြီး ငဲ့ကြည့်တတ်တဲ့သူမျိုးလေ ။ ကိုယ်က အဲ့ဒီအချိန်မှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ဝမ်းနည်းပြနေရင် နှစ်ခါမက ရှုံးတယ် သူ ငါ့ကို ချစ်နေသေးတာပဲ ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကျေနပ်နေတတ်ကြတာလေ ။
အရင်ကထက် ပိုပြီးလှအောင်နေပါ ညဘက်တွေ မအိပ်ပဲ မျက်တွင်းတွေနက်နေရင် . . .အဆင်မပြေဘူး ညီမလေးရဲ့ အရင်ကထက်ပိုပြီးလှအောင်နေ . . .ဝမ်းနည်းနေရင် ပိုပြီးလှအောင်နေတတ်ရတယ် ဒါမှ သူများမမြင်မှာလေ ။ ယောက်ျားဆိုတာမျိုးက . . .ကိုယ်လွှတ်တဲ့ငါး ကြီးနေတတ်ရင် တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး နောင်တတွေ ရနေတတ်ပါပဲ ။
ကိုယ်ထိလက်ရောက်လက်စားချေဖို့မလိုပါဘူး ။ ပြီးရင် ဝဋ်လည်ပါစေဆိုတဲ့ ဆုလဲတောင်းဖို့မလိုပါဘူး ကိုယ်က သူမရှိပဲ နေနိုင်နေမှန်းသိသွားတဲ့အခါ ကိုယ်အလိုလိုနိုင်ပါတယ် ။
ကိုယ့်ကို ထားခဲ့တဲ့သူကို နောင်တတွေ ရစေချင်ရင် . . .အရင်ကထက်ပိုပြီး လှအောင်နေပါ ။ ရင်ဘတ်ထဲ နာချင်နာနေပါစေ မျက်နှာမှာ အလှဆုံး ရအောင်ပြုံးပါ ဒါ အကောင်းဆုံး လက်စားချေနည်းပါပဲ ။ လမ်းမှာ မတော်တဆဆုံလာတဲ့အခါ . . .ကိုယ်က သူ့လက်ထဲမှာ ရှိနေတုန်းကထက် ပိုပြီး အမြင့်ကိုရောက်နေတဲ့အခါ သူ့ဘေးနားက မိန်းကလေးထက် ကိုယ်က ပိုပြီးရင့်ကျက်နေတဲ့အခါ နောင်တတွေ တသီကြီးရလာပါလိမ့်မယ် ။
အပြိုကွီးဘ၀နဲ့ ကိုယျ့ဘ၀ကိုယျကိုယျ သာသာယာယာဖွတျသနျးနရေတာကိုပဲ ပြျောရှငျပါတယျ